Qodobadan Samee Si aad u hanato kalsoonida Ilmahaaga - NorSom News
Cabdishakuur Heersare: Qoraha maqaalkan
Haddaba, ilmuhu intaa uu ku jiro maraaxilka koritaanka waxa uu la mid yahay geed koraya oo toos toosin u baahan. Sida uu cunto uu ku noolaado oo uu ku koro ugu baahan ahay ayuu u baahan yahay wax u sheegid, waanin iyo toosin ku dhisan hogatusaalayn xanbaarsan xaqiiqada nolosha ee dhabta ah. Maadaama oo qurbe lagu nool yahay ilmuhu waxa uu baahan yahay ka warhayn badan iyo dhiirrigelin joogta ah.
Abbaarta qormadu waxa ay tahay in aad halkan kaga bogan kartaan kelmadaha wanaagsan ee carruurta lagu dhiirrigeliyo si ay kalsooni buuxda u helaan. Waana qodobo ay ku jiraan kelmado jacayl iyo isu soo dhawaansho ka dhex abuuraya waalidka iyo carruurta. Waxa hubaal ah inay jiraan waalid badan oo soomaali ah oo qodobadan aanu soo bandhigi doono ku dhaqma oo sameeyaa, inta kale ee aan samayn-na fursad ayey u tahay. Waxa ugu weyn ee ilmuhu waalidkiisa kaga dayan karaa waa dhaqanka wanaagsan ee diinta islaanka iyo hab macaamilka suubban ee loo baahan yahay in ku booriyo mar kasta.
W.Q: Cabdishakuur X. Muxumed Muuse (Heersare)
Qoraa/Tababare Saxaafadeed: http://heersare1.blogspot.no/
Previous article(Maqaal): Jama Hursow: Talooyin Ku Socdo dadka ku cusub Norway ama wadamada kale ee Yurub.
Next articleDaraasad : laga sameeyay natiijada dugsiyada sare ee dhalinyarada soo galootiga ah, Waa sidee xaalka dhalinyarada soomaalida.